यी चीजहरु मध्ये कुनै एक घरमा राख्नुहोस् , चम्किनेछ भाग्य – NepalajaMedia
February 24, 2021 74
काठमाडौ । मानिसहरु घरलाई आर्कषक र राम्रो बनाउनको लागी घरमा विभिन्न किसिमका आकर्षक खालका सामानले सजिसवाज गर्ने गर्दछन्, जसले घरलाई निकै सुन्दर बनाएको हुन्छ । तर वास्तु शास्त्रमा घरमा कस्ता समान राखेर मात्र सजाउन मिल्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । घरमा राख्न नहुने समान राखेमा घरमा निकै हानी गर्दछ
चर्चित गायक रत्न बाँनियाको नि’ धन, आजै पशुपति आ’र्यघाटमा अन्त्य’ष्टि गरिने
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका ६ जनामा कोरोना संक्रमण
हे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो) (1494)